Waraysi arday ku sugan Wuhan, Shiinaha
Shaqaale caafimaad oo ku sugan
Wuhan waa magaalada toddobaad ee ugu weyn dalweynaha Shiinaha waxaana caadiyan ku nool 11 milyan oo qof, inkastoo mas'uuliyiinta waddankaasi ay aaminsan yihiin in dadka qaar ay iskaga baxeen magaalada ka hor intii aan la xakamaynin dhaqdhaqaaqa.
Dadka ku nool magaalada waxaa ka mid ah tiro kooban oo Soomaali ah kuwaasi oo la sheegay inay dhan yihiin kudhowaad 50 qof.
Soomaalida ku sugan magaaladaas oo u badan arday waxay soo direen qaylo-dhaan ay u jeedinayaan dawladda Soomaaliya in laga daadgureeyo magaalada oo xaaladdeedda xanuunka dilaagga ah ee CoronaVirus uu kasoo darayo maalinba-maalinta ka dambaysay.
Soomaalida joogta magaaladaas waxaa u badan arday. Haaruun Macruuf ayaa mid ka mid ah kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada, waxaana uu ka waraystay nolol-maalmeedkiisa laga soo bilaabo subaxda.
Ardaygan uu waraystay Haaruun Macruuf waxaa lagu magacaabaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdi, waxaana uu farsamada batroolka ka bartaa Jaamacadda Barashada Saynidka Dhulka ee ku taalla magaaladaas.
Waraysi arday ku sugan Wuhan